सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको बैंकिङ सेवा अब आइतबार पनि Bizshala -
काठमाण्डौ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। योसँगै विराटनगरमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै आइतबार पनि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसअन्तर्गत हाल बैंकले प्रदेश नं. १ मा रहेका आफ्ना ३५ शाखाहरुमध्ये १३ शाखा (मेनरोड विराटनगर, टंकीसुनवरी, इलाम, रंगेली, उर्लावारी, बिराटचोक, विर्तामोड, इटहरी, धरान, धनकुटा, बसन्तपुर, दमक र पुष्पलालचोक) बाट यही जेठ १ गतेदेखि नै सेवा प्रदान गर्नेछ र आगामी दिनमा बजारको आवश्यकता र गा्रहकको मागबमोजिम आइतबार सञ्चालन हुने शाखा संख्या बढाउँदै लैजाने नीति बैंकले लिएको छ।
आइतबार सञ्चालन हुने शाखाहरुमा बैंकले बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्नेछ।
बैंकको यस थप सेवाले ग्राहकमा सुविधा पुग्न जाने र आइतबार सञ्चालन हुने बजारलाई केही हदसम्म भए पनि बैंकिङ आवश्यकताको परिपूर्ति हुने र बैंकको यस प्रकारको सेवाले बैंक र जनताबीचको सम्बन्ध र विश्वास अझ प्रगाढ हुँदै जाने तथा व्यवसाय विस्तारमा सहयोगी हुने बैंकले विश्वास लिएको छ।
saptakoshi devdelopment bank limted
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी...
तेस्रो त्रैमाससम्म कस्तो छ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको
काठमाण्डौ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक घाटामा, ईपीएस ऋणात्मक, एनपीएलमा भने
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको...
तेस्रो त्रैमासमै रु. १ अर्ब बढी नाफा कमाउने पहिलो विकास बैंक
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै १...
गरिमा विकास बैंक: नाफा १५.६९%ले बढ्दा अन्य सूचकमा कस्तो छ
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो...
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो...
क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने नेपालकै पहिलो विकास बैंक बन्यो कामना
काठमाण्डौ । समयसापेक्ष ग्राहकको चाहनाअनुसार नवीनतम प्रविधिमार्फत...
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १५ औँ वार्षिक आज चैत १८...